UJohn Legend kunye noChrissy Teigen eBeverly Hills Ekhaya bathengisa iiMarike nge $ 23.95 yezigidi - Izindlu Ezithengiswayo
UJohn Legend kunye noChrissy Teigen eBeverly Hills Ekhaya bathengisa iiMarike nge $ 23.95 yezigidi
Imifanekiso kaGetty / Anthony Barcelo
Kwiintsuku emva kokuba uChrissy Teigen noJohn Legend babhengeze ukuba bakhulelwe umntwana wabo wesithathu, esi sibini sibeka indlu yabo yaseBeverly Hills kwintengiso yezigidi ezingama- $ 23.95.
Njengoko bekulindelekile, ikhaya labucala kunye nesango lihle kakhulu. Ngena kule ndawo yokuhlala iphakamileyo ye-8,520 kwaye uya kumangaliswa ziinkcukacha zayo ezintle. Amaplanga aseMandala avela eThailand, i-oki ephantsi komhlaba, kunye neendonga ezigqityiweyo zensimbi zihlobisa izinto zangaphakathi. Ngelixa sikubonisile ukukhangela kwikhaya lababini ngaphambili, sowuzakufumana ukhenketho olupheleleyo.
Okokuqala igumbi lokuhlala! Akukho kubetheka entloko kwezi iisilingi zizinyawo ezingama-33 eziphakamileyo.
Emva koko, sinegumbi lokuhlala elinomboniso wefestile emgangathweni.
Njengoko unokuthelekelela, uTeigen wayefuna indawo eninzi, kunye nezinto zombane, ukuvavanya iindlela zethu zokupheka, Iminqweno . Ikhitshi elenziwe ngabapheki lasekhaya linikezela ngayo yonke loo nto, kunye netafile encinci kunye nesihlalo esimiselwe ngokufanelekileyo abantwana abancinci.
Emva kosuku lokuba kwindawo ebonakalayo eluntwini, igumbi lokulala elithozamisayo lalibalulekile kwisibini esaziwayo. Igumbi lokulala eliyintloko linobhedu, ikhonkrithi, kunye nendawo yomlilo yodongwe kunye nebhalkoni enkulu.
Kukho 'igumbi elimnandi,' njengoko uluhlu lubhekisela kulo. Yonke iphupha lomogul's, akunjalo?
Sukuba nexhala, kukwakho nendawo eninzi yekhabethe. Ndine hunch Teigen isebenzisa eli gumbi ngaphezu kweLegend.
Kodwa ukuba ujonge nje ukuzilungiselela phambi kwesipili kwaye ngekhe ufune igumbi elimnandi, kukho izindlu zangasese ezisibhozo ezintle.
Ngaphandle kwendlela entle yasekhaya, zininzi iindawo ezinobubele ebantwaneni.
Ungasathethi ke ngeqonga lokugqibela lasekhaya. Kukho umatshini we popcorn kwikona!
Ukhenketho luyaqhubeka ngaphandle apho uyakufumana ichibi lamanzi anetyuwa ashushu, i-jacuzzi, kunye neembono zecanyon ezikhumbuza iTuscany.
Kukho ne-pergola enomtsalane exhotyiswe nge-oveni etshisa iinkuni kunye ne-chef's grill. Ukugqibelela izidlo zangaphandle!
Okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho, kukho umthambo wasekhaya! Sebenza!
UMarshall Peck kaDouglas Elliman ubambe olu luhlu. Unokufunda ngakumbi Apha .
peyinta izimvo kwigumbi lokulala
uyilo lweepaneli zodonga
Indlu ye-wandavision brady yeqela